South Asia and Beyond: जब सामाजिक सञ्जालमा इमान्दारहरु डा केसीको अभियानप्रति नतमस्तक भए!
जब सामाजिक सञ्जालमा इमान्दारहरु डा केसीको अभियानप्रति नतमस्तक भए!
ढुक्क छन् ऊनी
भित्र सत्याग्रहमा छन्
डा गोविन्द केसी#IamwithDrKC pic.twitter.com/akJdSsDMQt
— Guna Raj Luitel (@gunaraj) July 10, 2016
अख्तियार प्रमुखको सपथ यसरी भएको थियो । नेताहरुलाई लाज ढाक्ने अवसर मिलेको छ pic.twitter.com/9yuVUbrFa5
— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) July 10, 2016
डा केसीको आन्दोलन कस्तो समाज निर्माण गर्ने जस्तो विषयसँग जोडिएकोले यो एक्लो संघर्ष होइन,सबै सचेत नेपालीको आन्दोलन हो pic.twitter.com/bkMwoM3qgO
— Gagan Thapa (@thapagk) July 9, 2016
डा केसीको अभियानलाई हार्ने 'सुविधा' छैन। उनि हारे भने बेथितिका अभियन्ताहरुको मनोबल ह्वात्तै बढ्नेछ। मुलुक बन्ला भन्ने आशाको दियो निभ्नेछ।
— Surya Raj Acharya (@SRA525) July 9, 2016
मलाई धेरैले सोधे - तपाईं कस्को पक्षमा ? मैले जवाफ दिएं - 'भनिराख्नु पर्छ ? #IamwithDrKC '
— Amrit Gurung (@amritnepathya) July 10, 2016
बाध्य पारिएकाे डा. केसीकाे अाठाैं अनशन माफियाप्रेमी सरकार, अराजक अख्तियार र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरुकाे गालामा पड्काएकाे थप्पड हाे। #IamwithDrKC
— Mumaram Khanal (@mrkhanall) July 11, 2016
मनको गहिराइमा हरेक मानिसलाई थाह छ--डा केसी आफ्ना लागि हैन, अरुका लागि लड्छन्, 'हाम्रा' लागि लड्छन्. त्यो राजेन्द्र पाण्डेलाई पनि थाह छ!
— Ameet Dhakal (@ameetdhakal) July 10, 2016
`सुशासन´ का लागि
समयले सायद केहि थान
`इमानदार सन्कि´ अझै खोजिरहेछ !
दुवै हात जोडेर भनें…
डाक्टर साब हामी साथमा छौं pic.twitter.com/aCJ8fTnnKb
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) July 10, 2016
हाम्रो मेपालमा एम आर आई नै नभएको कलेजमा एम डि रेडियोलोजीको पढाई हुन्छ। यस्तो कुराको अन्त्य हुन पर्छ । त्यसैले #IamwithDrKC
— Sudhamshu K.C. (@Drsudhamshu) July 9, 2016
डा. केसीको अनशन लम्बिने छैन, किनकि केपीले हरेक दोबाटामा बिपी वा गणेशमानका नाम भजाएर दाम कमाउन खुलेका दोकानका पंक्तिमा मनमोहनलाई राख्नुहुन्न।
— रामेश (@RaameshKoirala) July 10, 2016
सत्याग्रह vs सत्ताग्रह:
शिक्षण अस्पतालको यो फराकिलो परिसरमा डा. केसीको सत्याग्रहका लागि साँच्चै नै ठाउँ पुग्दैन त? pic.twitter.com/blPVS6HfGJ
— केदार शर्मा (@kedarsh) July 10, 2016
हुचिललाई अपिल गरेर तिनकाे दिल पगाल्न कठिन हाेला । तर सहनशील हुन हामीलाई इतिहासले दिदैँन । हामि गिद्धहरुकाे बिरुद्ध लडिरहन्छाैं।#Iamwithdrkc
— 'बिग्रेकी केटी' (@bigrekiketi) July 1, 2016
आज मानसिक रोगी डाक्टरले भकाभक चार जटिल शल्यक्रिया सफलतापुर्वक गरे। सद्दे अख्तियार तिम्रो diagnosis ले हावा खायो।#IamwithDrKC
— Bishad Dahal (@dahalzone) June 29, 2016
यस्तै बेथितीको अन्तयका निम्ती म डा.केसिलाइ सपोर्ट गर्दैछु !
अनि तपाँईहरु नि ? #IamwithDrKC pic.twitter.com/Ce8ZbJNXAY
— उज्वल तिमल्सिना (@D33p_ujwal) July 11, 2016
‘लोकमानतन्त्र’को विरुवा रोपेर मलजल गरिरहेकाहरुले डा. गोविन्द केसीको ज्यान लिन सक्छन् । हर क्षेत्रबाट खबरदारी बढाउनु जरुरी छ । #IamwithDrKC
— Rameshwar Bohara (@rambohara) July 11, 2016
लाेकले मानेकाे मानिस मात्र लाेकमान हुन्छ। असली लाेकमान डा. केसी हुन्।
माफियाहरुले मानेकाे मानिस माफियामान हुन्।
— rosan (@ashorbik) July 9, 2016
Posted by Jiwan Kshetry at 4:05 PM
Labels: Dr. Govinda K C, Social media, Twitter